पानी कसरी पिउने ? » Etajakhabar
बुधबार, मंसिर ०६, २०७४	| Wednesday, Nov 22, 2017
पानी कसरी पिउने ?
काठमाडौँ – पानी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक छ । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पानी पुगेन भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । पानीको कमीले शरीरभित्र मात्र होइन, शरीरबाहिर छालामा पनि नकारात्मक असरहरू देखा पर्न सक्छन् । कहिले धेरै, कहिले थोरै पानी खानु हुँदैन । खानेकुरा र पानीको मात्रा मिलाएर मात्रै सेवन गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा डेढदेखि दुई लिटरसम्म पानी आवश्यक हुन्छ । हामी धेरैको पानी पिउने बानी उस्तै छ । पायौँ भने एकैपटकमा एक लिटरसम्म पिउने, नपाए तिर्खा घटाएर पनि बस्ने । सधैँ केही समयको अन्तर राखी पानी पिउने गर्नुपर्दछ । पानी एकैपटक धेरै खाँदा किड्नीमा ओभरलोड हुन्छ र समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानी पिउने गर्दा शरीरका अर्गानहरू खुल्छन् । यसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ । हाम्रो शरीरमा डेढदेखि दुई लिटर पानीको मात्रा भएन भने बेहोस हुने, खुट्टा फर्कने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, झर्को लाग्नेजस्ता समस्या देखा पर्ने हुन्छ ।
लामो समय पानी नपिउँदा कहिलेकाहीँ मानिस बेहोस हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पानी पिउन सकिएन भने ज्यानसमेत जान सक्छ ।
पानी कम हुँदा हाम्रो छालामा असर पर्छ । पानीको कमीले छालामा सुक्खापन आउने, चाउरी पर्नेजस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन् । यति मात्रै होइन, शरीरमा एलर्जी हुन सक्छ । स्वस्थ छालाका लागि हामीले शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्दछ । पानीसँगसँगै झोल पदार्थ भएका खानेकुरा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । फलफूल, सागपात प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्दछ ।नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ११, २०७४ समय: ९:३०:१०
चितवनमा स्क्रब टाइफस, डेंगु र चिकनगुनियाका कारण ५ जनाको मृत्यु
खोकी लाग्दा भूलेर पनि खान नहुने यी ५ चीज, जसले समस्यालाई अरु बढाउँछ
५ मिनेट मै दाँत चम्काउने अत्यन्तै प्रभावकारी उपाय, जानी राखौँ
जाडो मौसममा काँचो बेसारको फाइदै-फाइदा
यदि तपाई आयुर्वेदिक औषधी सेवन गर्नुहुन्छ भने अवश्य यी ८ सावधानी अपनाउनुहोस्
युवा अवस्थाका मानिसलाई यो क्यान्सरको खतरा बढ्दै छ, यस्ता छन् संकेत र कारण
के तपाई होचो हुनुहुन्छ ? यस्तो छ, उचाई बढाउने अत्यन्तै उपयोगी ७ उपाय
यी ७ रोगहरूबाट बच्नु छ भने दिनहुँ १५ मिनेट अवश्य स्विमिंग गर्नुहोस्
नायक अनमोललाई टिका लगाउनकै लागी भनेर दिदी काजोल अमेरिकाबाट आएकी थिइन्
प्रचण्डको मुहारमा मुस्कान ल्याउने प्रयास गर्दै माधव नेपाल
उपत्यकामा बढाइयो सुरक्षा: ६ वटा क्षेत्र जोखिमको सूचीमा
यसकारण श्वेता खड्का खुशी छन् पछिल्लो समय
विश्वकै यस्तो अनौठो देश जहाँका महिलाले ब्रा र पेन्टी नै लगाउन पाउँदैनन्
चुनावपछि राजपा–फोरम पार्टी एकताः अध्यक्ष यादव